Izindaba - 4 Izinhlobo Zezitebhisi
1. Uma kungengenxa yobumnandi, isigxobo sokukhanya asinambitheki ngempela
Ukukhuluma iqiniso, isibani sezitebhisi cishe siyefana nesibani sendlela. Kuyisibani sokuqala emlandweni ukuthi sisetshenziswe njengomklamo wokucabanga wesigcawu, ngoba izitebhisi ebusuku kufanele zibe nezibani, uma kungenjalo kulula ukuwa, akunjalo?
Lesi sinyathelo samatshe sakhiwa phakathi kuka-1875 no-1889. Kunamalambu emigwaqo kagesi amane ezitimeleni zezitebhisi zamatshe ukukhanyisa izitebhisi. Lolu hlobo lwamalambu emigwaqo amahle seluphelile kwezinye izindawo eHongKong. Kuthiwa amalambu emigwaqo kagesi akwezinye izindawo eHongKong kancane kancane athathelwa indawo amalambu kagesi emhlabeni wesi-5 nowe-1960 emhlabeni ongaphezulu. Yilezi zine kuphela ezisaphathwa eSifundeni Esimaphakathi esiphumelelayo sesiQhingi saseHongKong.
Isithombe: Singabalwa njengesinye sezitebhisi ezidume kakhulu emhlabeni: izinyathelo zeDuddell Street eCentral, HongKong. Kube yindawo yezigcawu ezibalulekile kumabhayisikobho nakuchungechunge lwe-TV izikhathi eziningi.
Ngasikhathi sinye, kunezibani ezimbalwa zezitebhisi ezidumile ezitebhisini, okuwukuphela kwamalambu ezitebhisi asasetshenziswa eHongKong - amalambu egesi. Izitebhisi zikaDuddell Street ebusuku, izitebhisi ezingaphansi kwamalambu zindiza ngokuthandwa kwamalambu kagesi.
Umbuzo uwukuthi, uma kungewona lawo malambu kagesi asendulo asetshenziswe amakhulu eminyaka, kodwa amalambu ajwayelekile ezihamba ngepali ephansi, ngabe lezi zigxobo zokukhanya zisazoduma kangaka?
Izitebhisi zokubambelela empeleni zisetshenziswa njengezinto ezisizayo ezitebhisini futhi zisetshenziswa kakhulu ezimpilweni zethu. Ama-handrails wangempela adlala kuphela umsebenzi wokuhlobisa nowokuvikela, futhi empeleni ahlukene ngokuphelele nomsebenzi wokukhanyisa.
2. Ukwenziwa ngcono kokuklanywa kwamalambu nezibani kwenza kube nokwenzeka ukususa isigxobo sokukhanya esingenambitheki.
I-handrail ejwayelekile imane nje iyigrafu noma ukuthembela okuphephile ukusiza abantu bahambe, futhi ukuguqulwa okuncane kuyindawo yokuhlala elula.
Lapho i-handrail iba ilambu elithumela ukukhanya futhi likhanye ezitebhisini, izinyathelo zinomuzwa wesikhala. Ngezendlalelo, ukubaluleka kokwethula izinto ezikhanyayo kuyacaca. Ngalesi sikhathi, i-handrail iba ngumfanekiso ongemuva. Yize kwasetshenziswa amalambu we-fluorescent ajwayelekile kuphela, ngenxa yalokho, kwakusadingeka ngincome ukuthuthuka kwemvelo ngentelezi yokukhanya nobumnyama okwakhiwa ukukhanya.
Okulandelayo kwethula izindlela eziningana eziyinhloko zokuxazulula isinyathelo ukukhanyisa. Ngokombono wokuthuthukiswa kokusebenza kobuchwepheshe, kungaqondakala futhi njengomlando wokuziphendukela ebusuku wezitebhisi:
A. Uhlangothi lwelambu elingaphansi komhlaba
Izinzuzo: ukukhanya okuhle nomthelela wesithunzi;
Okungalungile: ukukhanya okuncane, ukukhanya okulula;
Izindawo ezisebenzisekayo: abantu abancane nesidingo sobumnyama, njengezitolo zekhofi, izindawo zokudlela zasentshonalanga namaqembu azimele, njll.
Njengezibani ze-In-ground ze-Eurborn I-GL116SQ, I-GL119, I-GL129 zifanele lezi zindawo.
B. Amabha wokukhanya afakwa ngaphansi kwezitebhisi
Izinzuzo: umphumela omuhle we-landscape, umthelela oqinile wokubuka;
Okumbi: akukho ukusatshalaliswa kokukhanya, okunzima ukufaka;
Izindawo ezisebenzayo: ezokuvakasha, izindawo zokuzijabulisa, njll.
C. Izibani zobungcweti zokuthuka kanye ne-guardrail
Izinzuzo: ukusabalalisa okuhle kokukhanya, okuphephile, okuhle;
Okubi: izindleko eziphezulu, ezingekho ejwayelekile, zidinga ukwenziwa ngokwezifiso ngosayizi wepayipi lensimbi.
D. Ibhande elikhanyayo ngaphansi kwesihlalo
Izinzuzo: elula, eshibhile.
Okumbi: akukuhle, akuphephile, kukhanya komgwaqo okungalingani;
Izindawo ezisebenzayo: izindawo zomphakathi ezinezidingo eziphansi, njll.
Ngaphezu kokusetshenziswa kakhulu ezitebhisini, amalambu okuthuka angasetshenziswa njengokukhanyisa i-Garden, Landscape lighting, Pedestrian overpass lighting nokunye.
Inikeza ngezibonelo eziningi kakhulu zesicelo sesigcawu, kusuka kweyokuqala ngqá ngokufaka amashubhu we-fluorescent ezindaweni zokubambela izingalo, kumabha wokukhanya aqinile nasemapheshaneni alula elithambile. Eqinisweni, ukwakheka kwalesi sikhanyiso esisekelwe endaweni yesehlakalo besilokhu sithuthuka ngokungakhathali, ngakho-ke yiziphi izici okufanele zibe nakho ukukhanya kwe-handrail guardrail?
1. Idizayini edidiyelwe ye-guardrail namalambu, inhlanganisela ephelele yomsebenzi wokukhanyisa kanye ne-guardrail landscape;
2.Ukuklanywa kokukhanya okuncane kakhulu, isakhiwo esifihliwe sesibani, okulula ukusifaka;
3.Ukuqamba kokushisa okunengqondo futhi okusebenzayo ukuqinisekisa impilo yenkonzo yokukhanya;
4. Lungiselela ukwakheka nokwakheka kwezinto zokwakha, futhi izinga lokuvikela lingaphezulu kwe-IP65;
5. Izinketho zezinto ezibonakalayo ezahlukahlukene, kungasetshenziswa amaphrofayili wensimbi engagqwali kanye ne-aluminium;
6. Ubuso bungaphathwa ngombala wemvelo wento noma ukwelashwa kwe-electrostatic noma ukwelashwa kwe-oxidation ukuhlangabezana nezidingo zemibala ehlukene nemisebenzi;
7. Impahla ye-PC yesithunzi sesibani iqinisekisa ukudluliswa kokukhanya, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokuguga, futhi akukho ukuphuka;
8. Imiklamo ehlukahlukene yokusabalalisa ukukhanya ingaxazulula ukukhanya komgwaqo ngobubanzi obungamamitha amabili kuya kwangu-8;
Xazulula umsebenzi wokukhanyisa ngenkathi ugwema ukuxhopha;
10. Izindawo ezikhethekile zidinga umphumela wokukhanya kombala, umbala owodwa noma ushintsho olunemibala;
11. Ukuvikelwa ekushayweni ugesi: Class III;
12. Thobela imininingwane kagesi ejwayelekile kazwelonke.